आमा, माईला मामा र मामाको छोरा 😭 « Gajureal
प्रकाशित मिति: ३१ आश्विन २०७८, आईतवार ०९:१०
प्यारो भाइ विवेक,
तिमी हाम्रो माईला मामाको एक्लो छोरोमात्र थिएनौ, एउटा ईमानदार, भद्र र परिश्रमी युवा पनि थियौ । उहिले जीवन मरणको लडाइँ लडिरहनु भएका मामाले तिमी जन्मिएको खबर सुनेर लामो श्वास फेर्दै भन्नू भएको अझै याद छ- ‘५ वटी छोरीपछि जन्मिएको यही छोरो हुर्किएर आमालाई पाल्छ, अब म मरेपनि चिन्ता छैन ।’
नभन्दै सानैदेखि संघर्ष गर्याै । माईजुको बाँच्ने साहारा भयौ । पाँच दिदिहरुको एक्लो माईती बन्यौ । आफन्तको आशलाग्दो सदस्य रह्यौ। हाम्रो हँसिलाे, प्यारो र मनपर्ने मावली भाइ थियौ । …तर, २२ बर्षको कलिलो उमेरमै शरीर छोड्यौ ! हामीलाई अन्त्यन्तै, अन्त्यन्तै र अत्यन्तै पीडा छोडेर गयौ भाइ 😭
माइजू कुन मनोदशाबाट गुज्रिरहनु भएका होला ! दिदीहरुलाई के बितिरहेको होला ! मामा सानिमाहरु दु:खको कत्रो पोखरीमा डुबेका होलान् ! हामी अत्यन्तै मर्माहत भएका छौँ कान्छा !
हाम्रा बुबा बितेपछि आमाले हामीलाई मावली गाउँमा गुँड सार्नुभयो । एक प्रकारले भनौं, मावलीघरमा शरण पायौं । बुबा नभएपनि बाल्यकालमा मामाहरुबाट एकप्रकारको अभिभावकत्व पायौं । त्यसमापनि माईलामामाको सरल र सहयोगीपनले आमालाई ७ वटा बचेरा च्यापेर माईतीमा बस्न सहज बनायो । तिमी त्यो व्यक्तीको वीज हाै जाेसँग हाम्रो ‘मामाभान्जा’भन्दा गहिरो प्रेम, अग्लो नाता र बलियो सम्बन्ध थियो 😰
मामा बितेपनि आमाले तिमीलाई ‘माईलो भाइ’ मान्नुहुन्थ्यो । माईजुले आमालाई अभिभावक ठान्नुहुन्थ्यो । हामी तिमीमा हाम्रा ती माईलामामाको स्वभाव देख्थ्यौँ जाे सोझो, परिश्रमी र प्रेमल हुनुहुन्थ्यो ।
‘रमिते’को लेकमा गोठ बस्दा होस् वा ‘मल्लिंडे’को बेँशीमा खेत जोत्दा होस्, ‘झिलझिले’मा अधियाँ कमाउदा होस् वा ‘दमक’मा बनिबुतो गर्दा होस्- हाम्रा माईलामामाले हाम्री आमालाई यति सहयोग गर्नुभयो कि सायद आमाले कहिल्यै एक्लो महसुस गर्नु भएन । अनि हामीले पनि !
हाम्री आमा अर्थात् ‘ठुल्दिदी’ र तिम्रा बुबा अर्थात् ‘माईलो भाइको प्रेमपुर्ण सम्बन्ध कमै दिदीभाइको हुन्छ होला ! त्यस्तो प्यारो भाइको एकमात्र छोरो, तिमी यस संसारमा छैनौ भन्दा तिम्री ‘ठुली फूपू’ अत्यन्तै मर्माहत हुनुहुन्छ ! हाम्रा सबैभन्दा प्यारा ‘माईलामामा’को पुत्राधिकारी सकियो भन्ने सुन्दा हामी भाव विह्वल भएका छौँ बाबू 😥
मृत्यु शाश्वत सत्य हो तर यति चाँडाे हुनुहुन्थेन, विस्मात यसैमा छ ! ६ सन्तानको भारी बोकेर दु:खका विकट पहाडबाट छिचोल्दै माइजू बल्ल सुखको श्वास फेर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर तिम्रो देहान्तले उहाँको यात्रामा फेरि डरलाग्दो भीरको उकालो बाटो आईपुगेको छ । माइजू, ५ दिदिहरु, तिम्रा मावली र हामीलाई तिम्रो अभावले सताई रहनेछ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली विवेक 🌷
सायद अहिले तिम्रो आत्मा ‘माईलामामा’ले गोठ पालेर आधा जिन्दगी बिताएको गुराँसे र रमितेको पातलतिर विचरण गर्दै होला ! झिलझिले, काठमाण्डौ, सप्तरीतिर फन्को मार्दै होला ! पुत्रवियोगमा छटपटिएकी आमाको वरीपरी घुम्दै होला । भातृवियोग रोईरहेका दिदी भिनाजुको छेउछाउ तरङ्गित हुँदै हाेला !
तिम्रो भौतिक शरीरबाट निस्किएको आकास तत्व (आत्मा)को अनन्तयात्रा मङ्गलय बनोस् । यदी तत्कालै पुनर्जन्मको योग छ भने फेरीपनि हाम्रै मावली खलकमा जन्म लेउ, हामी प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ साने😭हरि ॐ तत्सत् 🙏